Infinity for Reddit | Net Guide
Mobile Division ဥက္ကဌသစ်အား Samsung ခန့်အပ်
Pocophone F2 တွင် Snapdragon 765 5G SoC နှင့် ဘက်ထရီ 5000 mAhပါဝင်မည်
ဗြိတိန်တွင် 5G အတွက် Huawei ကို သုံးသွားမယ့် Vodafone နှင့် BT
Home Infotainment Apps Infinity for Reddit
Infinity for Reddit ဟာ ချောမွေ့ညက်ညောတဲ့ Reddit browsing အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ app ဖြစ်ပြီး၊ post တွေနဲ့ comment တွေ browse လုပ်ဖို့၊ post တွေ၊ comment တွေတင်ဖို့နဲ့ voting လုပ်ဖို့ စတာတွေပေါ် အဓိကထားတဲ့ app ဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝ free အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကြော်ငြာတွေမရှိတဲ့အတွက် Reddit ကို အနှောင့်အယှက်မရှိ browse လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ feature တွေအများကြီးထဲမှာမှ Lazy mode ကို on ထားမယ်ဆိုရင် post တွေကို အလိုအလျောက် scrolling လုပ်ပေးတာဖြစ်လို့ သင့်ရဲ့လက်ကို လှုပ်ရှားစရာမလိုဘဲ content တွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Multi-account support ပေးထားလို့ တစ်ပြိုင်တည်းမှာ အကောင့်တွေအများကြီးကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးထိခိုက်မှုကနေ ကာကွယ်ဖို့ အတွက်လည်း လှပစွာဒီဇိုင်းဖန်တီးထားတဲ့ Night theme ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Post comment page ကနေ ပြန်ထွက်ဖို့အတွက် ညာဘက်ကို swipe လုပ်ပြီး၊ နောက်ထပ် top-level comment ဆီသွားဖို့ အတွက် post comment page က action button ကို နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုဖို့အတွက် Android 5.0နဲ့အထက် လိုအပ်ပါတယ်။
Infinity for Reddit ဟာ ေခ်ာေမြ႕ညက္ေညာတဲ့ Reddit browsing အေတြ႕အႀကံဳကို ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ app ျဖစ္ၿပီး၊ post ေတြနဲ႔ comment ေတြ browse လုပ္ဖုိ႔၊ post ေတြ၊ comment ေတြတင္ဖုိ႔နဲ႔ voting လုပ္ဖုိ႔ စတာေတြေပၚ အဓိကထားတဲ့ app ျဖစ္ပါတယ္။ လံုးဝ free အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ေၾကာ္ျငာေတြမရွိတဲ့အတြက္ Reddit ကို အေႏွာင့္အယွက္မရွိ browse လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ feature ေတြအမ်ားႀကီးထဲမွာမွ Lazy mode ကုိ on ထားမယ္ဆိုရင္ post ေတြကို အလိုအေလ်ာက္ scrolling လုပ္ေပးတာျဖစ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕လက္ကို လႈပ္ရွားစရာမလိုဘဲ content ေတြကိုၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Multi-account support ေပးထားလုိ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ အေကာင့္ေတြအမ်ားႀကီးကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ မ်က္လံုးထိခိုက္မႈကေန ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္လည္း လွပစြာဒီဇိုင္းဖန္တီးထားတဲ့ Night theme ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္မွာပါ။ Post comment page ကေန ျပန္ထြက္ဖုိ႔အတြက္ ညာဘက္ကို swipe လုပ္ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ top-level comment ဆီသြားဖုိ႔ အတြက္ post comment page က action button ကုိ ႏွိပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳဖုိ႔အတြက္ Android 5.0နဲ႔အထက္ လုိအပ္ပါတယ္။
Previous articleDesert Island – A Digital Wellbeing Experiement
Next articleAcer Aspire C22-866 (All in One)
ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 နိုဝင်ဘာလလောက်က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Xiaomi Mi CC9 Pro ကို Premium Edition အနေနဲ့လည်း ထပ်မံထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ၎င်းဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကင်မရာဖုန်းတစ်လုံးလို့တောင် ပြောရလောက်အောင် ကင်မရာစွမ်းအားတွေ အထူးကောင်းမွန်ပြီး ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Specs တွေနဲ့ features တွေက...